ဂျပန်နိုင်ငံက စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း COVID-19 အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက် ဖြေလျှော့ - Xinhua News Agency
တိုကျို၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တိုကျိုမြို့နှင့် နောက်ထပ် စီရင်စု ၁၈ ခုတွင် လွှမ်းခြုံထားသော COVID-19 အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် အခြားဒေသများ၌ လွှမ်းခြုံထားသော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အရေးပေါ်အခြေအနေများအား အောက်တိုဘာ ၁ ရက်၌ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အပြည့်အဝဖြေလျှော့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ယင်းမှာ ဧပြီ ၄ ရက်မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စီရင်စု ၄၇ ခုလုံးတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အရေးပေါ်အခြေအနေ လုံးဝမရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရသည် နောက်ထပ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုလှိုင်းများအား ကာကွယ်နေသလို လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေလျှော့ရေး စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေအား ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြေလျှော့ခြင်းနှင့်အတူ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်လည်း ပြည်တွင်း ခရီးသွားများအတွက် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ပန်းခြံများကဲ့သို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာလည်း စားသုံးသူများ များပြားလာစေရန် မျှော်မှန်းလျက် ပြင်ဆင်မှုများ စတင်နေပြီဖြစ်သည်။
ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းများအားလုံးသည်လည်း စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှု ၅၀,၀၀၀ ခန့် လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်လကထက် ၁၀ ဆကျော်နီးပါမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တိုကျိုဒစ္စနေးပန်းခြံများနှင့် ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယိုများတွင်လည်း နေ့စဉ်လာရောက်သူ အများဆုံးအရေအတွက်မှာ ၅,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀ အထိ မြင့်တက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေအရ အရက်သောက်သုံးနိုင်သော သို့မဟုတ် ကာရာအိုကေဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများကို ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး ရပ်ဆိုင်းထားရန် ပြောကြားထားခဲ့ကြောင်း၊ အရက်ရောင်းချခြင်းမရှိပါက ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈:၀၀ နာရီမတိုင်မီ ပိတ်ထားရန် မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်း သိရသည်။
ဗဟိုအစိုးရက အစားအသောက်ရောင်းချသည့် ဆိုင်များအား ည ၈:၀၀ နာရီမတိုင်မီပိတ်ကြရန်နှင့် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသူများဖြစ်ပါက နောက်ထပ်တစ်လအထိ ည ၉:၀၀ နာရီမတိုင်မီ ပိတ်ကြရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေကာလကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သဖြင့် လက်ရှိတွင် အဓိက အားကစားပွဲများအတွက် ခွင့်ပြုထားသော ပွဲကြည့်ပရိသတ်အရေအတွက် အများဆုံးမှာ ၅,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀ အထိ တိုးမြှင့်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဩဂုတ်လတွင် ကူးစက်မြန် COVID-19 ဒယ်လ်တာ (Delta) ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေ့စဉ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှာ ၂၅,၀၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိတွင်မူ ဂျပန်နိုင်ငံ၌ နေ့စဉ်ရောဂါကူးစက်မှု လျော့ကျလျက်ရှိကာ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၁,၅၇၆ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#Japan, #COVID_19, #StateOfEmergency, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #ဂျပန်, #အရေးပေါ်အခြေအနေ, #ဆင်ဟွာ
TOKYO, Oct. 1 (Xinhua) — Japan fully lifted the COVID-19 state of emergency covering Tokyo and another 18 prefectures, as well as the quasi-state of emergency covering other regions on Friday as scheduled.
The central government will continue to ask food selling establishments to close by 8 p.m. and those taking sufficient anti-COVID-19 measures by9p.m. for one more month.
In August, with the spread of the highly contagious Delta variant of the COVID-19 virus, Japan’s daily case spike peaked at about 25,000. Now the daily infections have been decreasing in the Asian country, and on Thursday, 1,576 new cases of COVID-19 were recorded nationwide. Enditem
Photo : People wearing face masks walk onastreet in Tokyo, Japan, on July 17, 2020. The Tokyo metropolitan government reportedafresh record number of 293 daily coronavirus cases on Friday. (Xinhua/Du Xiaoyi)